Maxaa loo takoorayaa konfurta Soomaalida??
Denbiga ugu ween ee konfurta soomalida laga galay waa ereyadan : arrinkiinu idinkuu idiin yaallaa , idnkaa is khilaafsan ee heshiiya.
Waa wax soo maalida u gaar ah oo laguma hayo taariihkda qolo iskhilaafta oo lgu yiri sidas , tusaale ahaan : markii Kenya khilaafku ka qarxay dhexdooda Bishii Yanayir 2008 . ma lagu yiri idinkaa isdilaaye hesheeya mrkaad heshiisan baan idin cawinaynaa, xaga dhismaha dalkiina? Haddiise inta sidaas lagu dhaho laga aamusi lahaa amma labad kooxood midkood ama labadaba lagu maal gelin lahaa hubiyo lacag, maxaa dhici lahaa?
Laakiin Bulshada caalmku sidaas may yeelin ee wey kala celisay waxaanay ku qasabtay inay heshiiyan dawladna wada dhistaan, waxaanu internashnal Cumunitigu qaaday tallaabooyinkan :1) wuxuu ka cuna qabateeyey xagii dhaqaalaha oo lajoojiyey dhammaan xiriirkii dhaqaalaha. , waxaa la xayiray wixii ay xissab kulahaayeen Bangiyada, waxaa laga xayiray visihii dalka kaga bixi lahaayeen, laguma dhaafin cunu qabataynta ee waxaa loo soodiray wafdi caalami ah oo ku qasabay inay ogoladaan dhex dhexaadinta ilaa lagaa gaarsiiyey inay hal dawlo wada dhistaan.
2- sidoo kale Hargeysa markii Madxwynihii kordhistay muddaadu xukunka sii ahyn lahaa 10\_ 4\_2008. , waxaa ka soo hor jeestay xisbiyada mucaaridka kuna hanjabay : in maalinta ay dhammaato muddadii la doortay oo ku eg 15\_5\_2008. aan loo aqoonsan doonin inuu yahay madaxweynaha dalka .
Laakiin lama dhihin idinku hesheeya aarrinkiinu idinkuu iddiin yaallaa, ee waa laga hortay intaan arriku adkaan . waxaa lagu sameeyey cunu qabteayn xaga dhaqaalaha waxaa la xayiray lactii loogu ballan qaaday in lagu taageeero doorashada , waxaa loo soo diray danjiraha ingiriiska ee ee Itoobiya jooga 22\_5\_2008. wuxuu la kulamay dhammaan dhinacyada arrinku hkuseeyo : madax weynaha , madaxda laba xisb ee mucaaridka , iyo guddiga dorashada, wuxuu u sheegay inaan la burburin dimoqaraadiya ka hirgashay wadanka waxaanu u ballan qaaday in loo furayo lacagaha ka xayiran markay heshiiyaan. Waxxanu ku qanciyey inaan qolona guul haleen , kuna qasban yihiin inay wada shaqeeyaan.
Waxay soo afjareen khilaafkoodii 1/6\_2008 saddexdii dhinac ba oo kala ahaa Madaweynaha, Axsaabta Mucaaridka iyo Guddiga doorashada waxaanay wada jir u shaaciyeen in hkilaafkoodii dhammaaday kuna heshiiyeen waqtiga doorashada Madaxweynaha iyo dowladaha hoos ,e dhici doonaan,
Ugu danbaystii waxaa loo soo diray 17/6/2308. wafdi UK oo heer wasaaro uu hogaaminaayo wasiiru Daolaha arrimaha debedda waxaanu qaabilay markiiba Madaxeynaha uu xusuusiyay wassirka taariihkduu uu ingiriisku xukumi jiray oo dhammayd ilaa 80sano .
Marka waxaa isweydiin mudan haddii la dhii lahaa Kenya iyo Soomaali Landi arrinku idinkuu idiin yaalla ee heshiiya, isamarkaana hub iyo lacag lagu taageero dhinacyada ama midkood, maxaa dhici lahaa ? waa maxay sababta loogu gaar yeelay Koonfurta Soomalida ereygan aariinku idinkuu idiin yaalaa?
Waatan Jawaabtii : sababta wadamada kale loo kala celinayaa konfurta soomalidana la isugu Hubaynayaa waa : dalaka kale waxay hoos imaanayan labada urur ee comon wealth iyo frankfon midkood , konfurta soomaliduna waxay ku hos jirta lisska Afro Amerika.
Marka waxaa la gudboon Maraykanka inuu u ogolaado konfurta soomaalida inta Ingifrisku u ogolyahay Kinya iyo inta fransiiku u ogolyahay djabuuti oo ah in loo ogolaado inay doortan dad iyaga matilaaya iyo arrinkooda iyaga toos logala xiriiro oon cid kale loo soo marin.
Marka haddaad doonaysid inaad fahamtid asaaska arrinkani ku dhisan yahay ahkri artiklaka hoos ku xusan:
Xiriirkii gumaysiga Afrika oo isu bedelay xiriir Sokeeye
Markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunida ,waxay go’ansadeen dowladihii ku adkaaday dagaalka inay dejiyaan nadaam cusub oo dunida ka badbaadin kara dagaallo danbi, sidaas baa lagu asaasay Jamciyadda Qaramada Midoobay (UNO). sannadkii 19945tii.
Waxaana ka mid ahaa go,aanadii ugu horreeyey ee Qaramada midoobay soo saartay in la cirib tiro gumaysiga dhammaantii oo aan la arag dad la gumasanayo dunida.
Marka si loo dhaqan geliyo Axdiga u soo celinta Qaranimada dadkii la gumaystay, waa in dhammaan dadkii gumaysiga ku jiray xoroobaan. Afrikaana u badnayd shucuubta Xorriyaddu ka maqan tahay.
Markaa Afrika dawladihii gacanta ku hayey waxay u qaybsanayd 3 qaybood oo kala ah:
1- dawladihii ku guuleeystay dagaalkii labaad ..
2- dawladihii la jebay .
3- iyo dawlado yaryar oon missn culus lahayn.
Dawladihii guulaysatay waxay ahaayeen 4. kala ah Maraykan (USA), Midawgoo Sofiti , Ingirisaka iyo Faransiiska.
Wuxuu arrinkii u dhacay sidatan:
1- Qeybtii ay gacanta ku hayeen dawladihii adkaaday waxay ballan qaadeen inay gaarsiinayaan xornimada dadyowga ay xukumaan, waxaanay ahaayeen dawladahaasi UK iyo Faransiiska, waanay fuliyeen ballanqaadkoodii waxayse abuureen laba isbahaysi oo kala ah Common Wealth iyo Frankfon.
Dawlada Maraykanka (USA) Afrika waxay ku lahayd kali ah Laybeeriya Iadoon xor bay iska ahayd , Midowga Sofiyeeti isagu wauuu ku haray Yurubta bari , kana sameeyey dawladau saaxiib la ah oo nadaamkiisa ku shaqeeya.
2-Qeybtii ay gacanta ku hayeen dawladihii dagaalka ku jabay waxay ahaayeen Talyaniga iyo Jarmalka. Talyaanigu wuxuu haystay laga bilaabo Kismaayo ilaa xuduudka Tuunis oo ay ku jirto Horn Africa oo dhan marka laga reebo Jabuuti. Waxaa kale uu haystay gobollo ka mid ah Kenya, Suudaan, Masar iyo Liibiya oo dhan.
Markuu ku jabay dagaalkii ayaa lagala wareegay wixii xuquuq ku lahaa dalalkii ahaystay , sannadkii 1946dii ba lagala saxeexay inaanu wax xaq ku lahayn dalakii u u gumaysan jiray marka sidaasu ku waayey walaayadii xirrika sokeeynimada .
Sidoo kale Jarmalku isna wuxuu waayay xuquuqdii uu ku lahaa Afrika markuu ku jabay dagalkii hore waxaana lagala wareegay 1919kii Bariga Afrika sida Tanganika iyo Burundi. Dadkii Jarmalka ee deggana waxaa loo raray waddankoodii waxaana la wareegay Ingiriiska. Sidaas baanay ku lahayn xireer sokeeye oo gar ah
2- Waxaa soo haray dalalkii ay gumaysanayeen dawladihii yaryaraa sida Burtuqaal oo haysatay: dalalka Angoola, Musambiig, Geni Bisaw….. waxaa ku xigay Biljiika oo haystay Kongo Kinshasa.
3- Marka dawldahaasi way diiday inay madax baneeyaan dadka ay gumasanayaan marka dadkii baa la dagaallamay oo samaystay Jabhado xornimadoon ah, qaramada midoobayna waxay ku caawiyeen siday u xoroobi lahaayeen , marka Iyagaa isxureeyey oo may xoreen kuwii gumaysanaayey sidaasay ku waayeen xiriirkii sokeeyanimo.
Marka wuxuu arrinkii u dhacay inay qaramada midoobay xorriyadii ku dhawaaqaan xornimadooda.
Sidee buu isugu bedelay Xiriikii gumaysigu mid sokeeye
(الولاء لحمة من النسب)
Waxaa jira mabda’ soo jireen ah oo dunida oo dhammi ku dhaqanto kaasoo xaddidaya xiriirka u dhexeeya qofka wax gumaysta iyo kan la gumaystay marka xiriirka gumaysigu dhammaado. Macnuhuna waa in xiriirkii is-gumaysigu u beddelmaayo xiriir qaraabanimo oo isu hiilin iyo iskaashi. Marka xiriirka cusub ee ka dhexeeya dawladihii wax gumaysan jiray iyo kuwii ay gumaysan jireen waa xiriir isu hiilin iyo iskaashi, inkastoo aanu isu dheeli tirnayn, marka dawldaha ku jra labadaa isbahaysi ee kala ah Common Wealth iyo Frankphone dibadda lagama soo faragelin karo iyaguna isma gumaadi karaan oo waxaa xil ka saaran yahay Faransiiska iyo Ingiriiska. Haddii dhexdooda dagaal ka qarxo markiiba waa loo soo gurmanayaa oo ciidan baa la kala dhex dhigayaa, loomana oggolaanayo inay is xasuuqaan. Sidaa daraadeed, meelaha Afrika dabku ka holcayo waa inta ka baxsan labada isbahaysi ee aan soo sheegnay.
Walaayada waxaa iska leh qofka wax xoreeya(الولاء لمن أعتق)
Cidda wax xoraysa ayaa walaayada leh, macnaha xiriirka sokeeye waxaa dhalinaaya xoreynta , marka dawladii aan xoriyad siin shacabka ay gumaysanaysay u malaha xaqa xiriirka sokeeye ee dhashay.
Geesku malaha xiriir sokeeye waxaan ka ahayn Jabuuti iyo Hargeysa.
Geeska Afrika cid walaayad ku leh ma jirto waxaan ka ahayn Jabuuti iyo Hargeysa. Marka la cuskanayo mabda’a walaayada waxaa iska leh qofka wax xoreeyay. Macnuhuna waa in arrinka geeska Afrika ku jiro liiska dawladaha aan lahayn walaayad u hiilisa ama kala celisa, sababatoo ah dalalkii ka baxsanaa Ingiriiska iyo Faransiiska waxaa xornimada gaarsiiyay UNO, marka ma jirto dawlad si gaar ah xil uga saran yahay. Intuu Talyanigu gumaysan jiray wax walaayad ah kuma laha maxaa yeelay isagu ma xoreeyn, tusaale ahaan Jabuuti lama qasi karo oo Faransiiska ayaan oggolaaneyn sidoo kale Hargeysa lama qasi karo, maxaa yeelay, inkastoo aanay ku jirin Common Wealth, haddana Ingiriiska ayaa xil ka saran yahay oo xoriyadda siiyay una14 oggolaaday kuna geesi geliyey inay Soomaalida kale la midoobaan, marka ma oggola inay iyagu is xasuuqaan ama cid kale soo farageliso, oo haybadiisa iyo Sharaftiisa meesha dahsoon.
Marii uu ku kacay Dhega weyne xukuumaddii C/raxmaan Tuur 1991 waa la damiyay. Sidoo kale markii C/raxmaan Tuur ku kacay xukuumaddii Cigaal waa la xalliyay.
Isla markaana Konfurta Soomaaliya waxaa loogu deeqaayey hub aan xad lahayn . Markii ciidamdu u soo gurmadeen dadkii gaajeeysnaa sanadkii 1992dii. Waa la diiday in hubka laga dhigo maalishyaadka hubaysan.
Waxaa la mid ah Soomaalida dalka Koongo oo laba u qaybsan xagga xiriirka xornima gaarsiinta. Kongo Barasafil Faransiiska ayaa xoreeyay marka isagaa xil ka saran yahay oo isma qalan karaan dibaddana loogama soo duuli karo, dhibatooyinkii ka dhacay 1994 markiiba waa laxalliyay, laakiin Koongo Kinshaasa UNO ayaa xornimada siiyay marka ma jirto dawlad xil gaar ah ka saran yahay sida Koonfurta Soomaaliya cid kasta way u furan tahay inay soo farageliso. Waxaana loogu deeqay hub aan qiyaas lahayn, sida ay caddeyeen khubaradii QM ee loo xilsaaray arrintaas dawladihii ku xad gudbay cuna qabataytana hubka Soomaaliya, qaar ka mida IPF ee daneeya arrimaha Soomaalida ayaa la caddeeyay inay soo geliyeen Soomaaliya tobanaan kun oo qoriga loo yaqaan M16. Sidoo kale waxaa aad loo hubeeyay Eritareeya iyo Itoobiya waanay is gumaadeen illa uu gaaray khasaarihii dadka ku dhintay in ka badan 120 Kun oo maleeshiyo ah sida lagu baahiyay warbaahinta caalamka. Haddii labadaa isbahaysi ka mid ahaan lahaayeen dagaalkoodu heerka ma gaareen ee wax baa laga qaban lahaa.
Maabka Runta ah ee Afrikda Maanta.
Marka si dhab ah loogu fiirsado xaaladda hadda Afrika ku sugan tahay waxaa muuqata inaynoqotay saddex geesood kala ah: Common wealth, Frankphone iyo Afro-Amerika.
Dalaka ku jira Coman wealth iyo franki fon wey degan yihiin dhibaatoyinka ka jiraana gacanta kama baxan . Laakiin qaybaha ku jira liika Afro Amerika waa kuwas qaska iyo qalaasha ka bixin. marka waxaa looga bahan yahay Maraykanka in qaybta u haysto uu igolaado inta Farnsiiska iyo Ingrissku u ogolyihiin qaybohooda. Ha ddi arrimahaas shaki kaaga jiro ahkri artikialkan.
Marka waxaa muuqata in Maraykanku ku doodayo inuu isagu xaq u leeyahay walaayada dalalka ka baxsan Common Wealth iyo Frankophone... Sababtoo ah, ma jirto cid gaar ah oo xorriyadda siisay, maxaa yeelay, waxaa walaayadooda isla leh UNO. Marka maadaama uu Maraykanku u yahay laf dhabarka QM oo xaga maamulka iyo miisaaniyaddaba qayb libaax ka qaato, wuxuu isu arkaa inuu xaq u leeyahay walaayada Q.M. Sida ay caddaysay wasiiraddii hore Arrimaha debedda Olberayt markay tiri: UNO ma samayn karto wax aanay USA rabin fiir1·
Sidaa daraadeed wuxuu isu arkaa inu xaq u leeyahay :in loo aqoonsado dhammaan dawladaha ka baxsan labadaa isbahaysi ee Common wealth iyo frankphon. Taasoo lagu magcaabi karo Afro-Amerika ama wax u dhigma..
Gaar ahaan haddii la fiiriyo sidauu adda haqanto geeska guud ahaan ama Soomaaliya gaar ahaan waa gobol ka mid ah USA oo hoos yimaada Dawladda Federaalka. Sababtoo ah, haddii dawladda dhexe ee USA ay doonto inay walaayad ka mida Maraykanka tagto waa inay ka idan qaadataa ama la socodsiiso madaxda gobolka, laakiin xagga Soomaalida idan la’aan iyo ogaysiis la’aan ayey dawladda maraykanku siday doonto ugu mushaaxaysa, gaar ahaan xagga hawada oo dayuuradaha AC30 ay caado ka dhigatay inay guuxeeda ku argagixiso Muqdisho iyo hareereheeda markay doonto, sidoo kale xeebaha soomaalida dhammaanteed waxaa gacanta ku haya maraykanka siduu doonana ka yeeli kara. Waxaa kaloo jira madaxweynihii hore Bush uu noqday madaxweynihii ugu horreyey dunida oo dal xor ah oo ku jira Qaramada Midoobay intuu soo galo uu ku wereego baddiisa, barrigiisa iyo hawadiisa isagoon hal qof oo mas’uul ka qaabilin ama la hadlin isaga baxay, taasi waxay dhacday 1dii Jannaayo 1993. Marka taasi waxay ku tusinaysa kaalinta USA kaga jirto xaaldaha Soomaalida.
Mawqifka EU /
Haddii laga fiiriyo dhinaca EU waxaad mooddaa inay oggol yihiin in Maraykanku qayb libaax Afrika ka qaato xagga dhaqaalaha iyo Istratijiyadaba, laakin marna ma oggola inuu wada qaato ama la kali noqdo, gaar ahaan gobolkan G/Afrika ee xeebaha saaran. Sababatoo ah arrinku ma aha sidii hore uu ku koobnaa UK iyo Faransiiska, hadda Yurub way ka weeynaatay intii hore waxaanay ku xisaabtameysaa dhumucda dawladaha EU-da ku wada jira, midda kale, dhammaantood kama maarmaan Soomaaliya, mana jirto dunida dawlad miisaan leh oo ka maarmi kartaa gobolkaan.
Haddaan tusaale u soo qaadanno mowqifka dawladda Giriiga, waxaa dhacay in shirkii IPF (Igad Partiner Forum) Rooma ku qabatay Nofember 1998dii loogu yeeray inay uga soo qayb gasho goob joog ahaan, aad bay uga carootay, dawladdii Giriigu waxay soo dirtay wasiiir ku xigeen arrimaha dibadda waxaanu si caro leh u sheegay: inaanay aqabalayn dawladdiisu inay marti ka noqoto arrimaha Soomaaliya looga hadlaayo annagu dano ayaan ka leenahay, waxaan rabnaa inaan ka mid noqonno dawladaha daneeya. Anigoo ka yaabban danaha uu Griigu Soomaaliya ka yeelan karto, ayaan ogaaday markii 18/7/2002 ay dablay hubaysani ka afduubtay markab laga leeyahay Giriiga, markii muddo 24 berri la haystay ayay ku soo furatay $ 400,000 (afar boqol kun dollar). Marka waxaan ogaaday inay danteedu tahay in xeebahaas la sugo ammaankooda iyo waxyaalo kale oon la shaacin.
Waxaa kaloo jira in dawladaha EU guud ahaan ay wada danaynayaan gobolkaan isla markaana aanay rabin in qolo sad bursato, marka laga reebo Ingiriiska iyo Faransiiska. Waxaa dhacay in Jarmalku ku eedeeyay Talyaniga inuu rabo inuu ka xigsado Soomaalida, dawladaha kale ee reer Yurub sida uu ku caddeeyay mas’uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka oo lagu faafiyo joornaalka Barliin ee ka soo baxa magaalada Baarliin inuu yiri: Talyaanigu wuxuu rabaa inuu Soomaaliya naga xigsado ama isaga loo soo maro isagoo sheeganaya inuu xiriir hore la lahaa, laakiin qaanuunka EU ma oggola xiriirka kala xigsiga. Waxaana warkaan lagu faafiyay jariidadda Qaran 20/3/2002. Laakiin taasi ma reebayso in talyaanigu xiriir gaara la leeyahay Soomaliya iyo Ertereya, maxaa yeelay xiriirkii abuurmay waqtigii gumaysiga waxyaalo badan buu reebay oo saamayn ku leh dhaqanka, dhaqaalaha iyo luqaddaba. Laakiin xagga qaanuunka iyo Axdiyada reer Galbeedku kula dhaqmo dadyawga kale waa mid iyaga gaar u ah oo ay isku taxgelinayaan, dadyawga Afrikaanku kaalin kuma laha, maxaa yelay iyagaa loo tashanayaa. Waxaa u dhexeeya xuduudo aanay isu gudbi karayn ( ii soo maraw malagaa gel)
ee xuquuqda Qaxootiga.
Adv C/raxman Xuseen(Abu Xamsa)